Wararka Suuqa Kala Iibsiga Ee Laga Qoray Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Messi, Pedri, Zaha, Iyo Haaland
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa Kala Iibsiga ee laga Qoray Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Messi, Pedri, Zaha, iyo Haaland
April 11, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 11 April
Liverpool ayaa soo bandhigtay xiisaha ay u qabto kor u qaadista xiddiga Barcelona Pedri Lopez, taasoo keentay in Blaugrana ay ku dhacdo xaalad argagax leh, sida ay qortay Mirror .
Manchester United ayaa u baahnaan doonta inay bixiso Edinson Cavani £ 2 million hadii uu baxo xagaagan, xitaa hadii ay doonayaan inuu sii joogo, sida ay qortay Mirror .
Arsenal ayaa u dhaqaaqeysa dhanka West ham, iyadoo xiiseyneysa xidiga Manchester United Jesse Lingard, ee amaahda ku jooga Halkaasi sida ay qortay Daily Star .
Manchester United iyo Leeds ayaa ku soo biiray loolanka loogu jiro saxiixa 18 jirka daafaca Kyron Gordon oo ka socda Sheffield United, sida ay qortay Daily Mail .
Wakiilka Mino Raiola ayaa doonaya in macmiilkiisa aadka loo xiiseeyo ee Erling Haaland uu ka helo heshiis £ 1 million-usbuucii ah kooxda uu ku biirayo ee soo socota, sida uu qoray wargayska Mirror
Ka dib guuldaradii 2-1 ee Barcelona ka soo gaartay Real Madrid kulankii El Clasico Sabtidii, agaasime Guillermo Amor ayaa Sheegay in Kulankan uusan Aheyn kii ugu Danbeeyay ee Messi uu Ciyaaro Elclasico. Goal
Qeybta Hore ee Suuqa Kala Iibsiga 11 April
Inter ayaa u aqoonsatay tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone inuu yahay ninka ay doonayaan inuu bedelo Antonio Conte, ayuu yiri Todo Fichajes .
Juventus ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqdo inay la soo wareegto ciyaaryahankeedii hore Moise Kean ka dib amaahdiisa cajiibka ah ee uu ku qaatay Paris Saint-Germain, sida ay qortay Tuttosport .
Maurizio Sarri ayaa diiday dalab uga yimid Fiorentina si uu u noqdo tababarahooda cusub, isagoo ugaarsanaya kooxaha Napoli iyo Roma Football Italia
Jerome Boateng ayaan bartilmaameed u aheyn Barcelona, ​​sida ay qortay Mundo Deportivo.
Manchester United ayaa weli isha ku heysa goolhayaha Atletico Madrid Jan Oblak, sida laga soo xigtay 90min .
Cristiano Ronaldo ayaa ka tagaya Juventus kuna biiraya Paris Saint-Germain taasinoo weli ah suurtagal, warinayso Tuttosport.
Kooxaha ku xifaaltama Waqooyiga London ee Arsenal iyo Tottenham ayaa labaduba isha ku haya Wilfried Zaha, Fichajes .
Andrea Pirlo ayaa meesha ka saaray inuu xagaaga ka tagayo Juventus xidiga Paulo Dybala, iyadoo tababaraha Bianconeri uu kalsooni ku qabo in xiddiga reer Argentina uusan dhaqaaqi doonin inkastoo uu ku dhow yahay sanadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa. Goal
Zlatan Ibrahimovic ayaa qarka u saaran inuu qandaraas kordhin hal sano ah u saxiixo Milan, Paolo Maldini ayaa xaqiijiyay. Sky .
Xiddiga kooxda Barcelona Ousmane Dembele ayaa dareemaya kalsooni ku aadan mustaqbalkiisa garoonka Camp Nou, iyadoo wararka soo baxaya ay sheegayaan inuu isku diyaarinayo inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda reer Spain. Goal